Thursday January 31, 2019 - 21:20:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda dabadhilifka Aala sacuud ayaa ku dhawaaqday in uusoo idlaaday howlgall raaf ah oo qaatay muddo 15 bilood kaas oo lagu beesanayay wax ay ugu yeertay madaxyaweynta musuq maasuqa wadanka balse wali waxaa halkiisi kasii socda raafka lagu hayo cu
Dowladda dabadhilifka Aala sacuud ayaa ku dhawaaqday in uusoo idlaaday howlgall raaf ah oo qaatay muddo 15 bilood kaas oo lagu beesanayay wax ay ugu yeertay madaxyaweynta musuq maasuqa wadanka balse wali waxaa halkiisi kasii socda raafka lagu hayo culimaa'udiinka iyo dadka caadiga ah ee kasoo horjeestay isbedelka calmaaniyadda ee maxamed Bin salmaan uu ka wado dhulka xarameynka.
Mas'uuliyiin u hadlay xukuumadda Riyaad ayaa xalay ku dhawaaqay in lasoo gaba gabeeyay howlgalkii lagu raafay qaar kamid ah amiirrada wadanka,maalqabeenno iyo shakhsiyaad madax u ahaa shirkado waaweyn oo dhanka maalgashiga ah una dhowaa qoysa faasidka ah ee talada haya.
Howlgalkan oo soo billaawday bishii Novembar ee sanaddii 2017 ayaa lagusoo beegay waqtigii Maxamed Bin Salmaan uu noqday dhaxal sugaha wadanka uuna sare uqaadday awooddiisa maamul isagoo eryay saraakiishii isaga ka sarraysay oo uu kamid ahaa Maxamed Bin Naa'if iyo tiro wasiirra ah oo si aad ah ugu dhawaa Cabdalla Bin Cabdul caziiz hoggaamiyihii hore Aala sacuud ee halaagsamay.
Maamulayaasha Dowladda Sacuudiga waxay sheegayaan in howlgalkii hotelka Ritz-Carlton ee magaalada Riyaad ay ku heleen lacag dhan 100 bilyan oo dollar lacagtaas oo si qasab ah looga qaatay 87 qof oo ubadan maalqabeenno amiirro iyo ganacsato maxalli ah,warbixinta cusub ee soo baxday ayaa lagu sheegay in 57 qof oo kamid ah ganacsatada howlgalka lagu qabtay arrintooda loogudbiyay xeer ilaalinta Aala sacuud halka kuwa kale lagala wareegay saamiga qeyb kamid ah hantidooda.
Aala sacuud waxay sheegaysaa in 8 Nin oo ganacsatada kamid ah ay diideen in hantidooda ay saami kasiiyaan qoyska talada haya walina lagu hayo xabsi uu si gaar ah umaamulo maxamed Bin salmaan, hantida ganacsatada lagala wareegay ayaa kala ah, lacago caddaan ah, guryo iyo dhismayaal ganacsi iyo sidoo kale in kala bar hantidooda gaarka ah ay ka tanaasuleen maalqabeenada waaweyn waxaana kamid ah ninka lagu magacaabo Waliid Bin Dalaal.
howlgalkii dhacay sanad ka hor ayaa xilligaas dad badan ka yaabiyay wuxuuna ahaa tallaabadii ugu horreeyay ee Bin salmaan uu ku qabqabtay wasiiro iyo ganacsato waaweyn waxayna falanqeeyayaashu xilligaas ku tilmaameen qar iska xoonimo weyn oo uu nidaamka cusub sameeyay.